Inkontileka Yokukhipha Inikezwe Umsakazo weLynnhaven Inlet Navigation Channel
Inkontileka Yokudonswa Kwe-Lynnhaven Inlet Inikezwe Umvuzo; Indwangu Yakhelwe Ukusetshenziswa Okuzuzisayo
Isifunda saseNorfolk, i-US Army Corps of Engineers, sinikeze inkontileka eyizigidi ezingama-2 zamadola aseMelika yokulungiswa kwesondlo eLynnhaven Inlet Federal Navigation Channel eVirginia Beach, eVa.
ILynnhaven Inlet njalo ngonyaka iba ngaphansi kokulungiswa kokulungiswa ukuze ilwe nokudubula okubucayi; Kodwa-ke, ngenxa yomthelela weSiphepho uSandy ogwini lwaseVirginia nyakenye, isimo sokudubula sanda kakhulu futhi sidingeka ukusheshiswa kwezimoto, kusho uKristin Mazur, umphathi wephrojekthi weNorfolk District.
"Ucwaningo lwakamuva lukhombe ukudotshwa okubucayi esiteshini sokungena, ukuguqula imigodi neziteshi eziseceleni zephrojekthi," kusho uMazur. "Lokhu kudubula, uma kushiywe wedwa, kungahle kube nomthelela omubi embonini ehlukahlukene yezasolwandle futhi kusongele ukuzulazula okuphephile nangokufanele."
Iphrojekthi ngokuvamile idinga imijikelezo yokulungiswa okugcwele yokulungiswa njalo kweminyaka emithathu.
ISouthwind Construction Corporation, okuyibhizinisi elincane elizinze e-Evansville, Ind, izokwehlisa isiteshi ekujuleni okudingakalayo okufika ku-10ft "kusho amanzi aphansi aphansi." Inkontileka yokunikezela ngempahla ifaka phakathi izinyawo ezimbili ezivumelekile zokujula okungaphezulu.
Usonkontileka uzosebenzisa ipayipi ukuthutha impahla ebiyelwe kabusha ukuze isetshenziswe kabusha ezindaweni ezinokubekwa ngasolwandle e-Ocean Park naseSitayeleni Semigwaqo yaseMaple Street eVirginia. Sekukonke, usonkontileka uzokwehla mayelana nama-ruby e-134,350 e-cubic ezibonakalayo
Ngoba le phrojekthi ithintwe yiSiphepho uSandy, ixhaswa ngoHlelo oluhlanganisiwe lwe-Post-Sandy Disaster, Ukusebenza kweCorps kanye nemali yesondlo kanye nezimali zabaxhasi bendawo.
Iphrojekthi ibizwa ukuthi iqediwe ngoJanuwari 2014.
ILynnhaven Inlet Federal Navigation Channel, eyayigunyazwe yi-River and Harbour Act of Oct. 23, 1962, itholakala Chesapeake Bay, phakathi nedolobha laseVirginia. Iphrojekthi yokukhangela inikezela ukufinyelela eChesapeake Bay nase-Atlantic Ocean yemikhumbi yokudoba yokuhweba, izikebhe zokudoba nge-charter, izikebhe zekhanda nezinhlobonhlobo zemikhumbi yokuzijabulisa yangasese.
Lesi siteshi sisetshenziswa izikebhe zokushayela zombili iziteshi zomshayeli weVirginia neMaryland ngaphakathi esigcawini ukuthutha abashayeli bezindiza ukusuka esikhumulweni semikhumbi eya e-Chesapeake Bay.